Faayidaa Addaa Naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu laalchisee labsii Wayyaanee « QEERROO
May 1, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	2 Comments
Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Dhimma kana wajjin walqabsiisee, wixineen “የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስአበባ ላይ ያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩ ጥቅምንአስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናትሰነድ” jedhu tokkos dhiyaatee jira. Labsii gara fuula 14 qabu kana dubbisee hanaga naaf galetti hubadhee jira. Duraan dursee, wanni nama gammachiisu Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBO) fi sochiin uummata Oromoo hangam Wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhe fi jilbiifachiisaas akka jiruu dha. Kun ammoo wareegama Sabboontotni Oromoo kaffalanii fi kaffalaas jiraniin waan argameef galannii gootota keenyaa daangaa hin qabu. Asitti aansee wantan wixinee labsii kanarraa hubadhee keessaa qabxiilee tokko tokko kaaseen yaada koo dhiyeessuu yaala.
በጥንት ስሞቻቸው እንዲጠሩና ተዛብተው እየተጠሩ ያሉት ስሞች እንዲስተካከሉ ይደረጋል፡፡
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት እና በሌሎች የሀገሪቱ ሕጎች የተከበሩ
« Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
FIRRIS DIINNIS AKKA BEEKUU FI HUBATU KAN BARBAADNU!
Murnaan ta ‘e Gartuun, Nama tokkoon ta ‘e Jaarmiyaan, Diina keessaa fi Alaa, Diina Innikkaa ykn Diina Tarsiimoo fi Diina toftaan QBO fi ABO irratti Duula ololaa Miidiyaa fb, Vidiyoo maxxansuu fi Barruu Shiraa maxxansaa jirtan Hunda keesaniif. Bakka jirtanitti Waa isiniif dhaamuu fi hubachiisuu barbaadna!
Kan Qalbii qabdu ykn Qabu qalbeeffadhu! QBO fi ABO ololaa Yartuu fi gantuu, Ayaan laallattuu fi Habuuqeen ,Qadabukoon Kan laaffatuu fi daddaaqamuu miti.
ABO_n ! bu ‘aa ba ‘ii Qabsoo Daran kana irra amaa fi hadhaawaa ulfaataa Keessa qaxxaamuree as ga ‘e. Rakkoo keessaa fi Alaa danuu Wareegama qaqqaalii lubbuu itti kitimee QBO sadarkaa har ‘a ga ‘ee fi injifannoolee Mula ‘atan kana Danuu galmeesseera. Galta goototaa!
ABO waan Isa afe yoo jiraateef,
1.WBO sadarkaa fi humnaan guddisuu fi hidhachiisee cimsee Diina Ummata Oromoo Kan taate Wayyaanee lolee Buqqisuuf Oromoo fi Oromiyaa bilisoomsuuf Shaffeessaan Alkanii fi guyyaa Seexaa fi cichoominaan hojjechuu dha. Diina keenya Qabsoon Malee Abaarsaan hin buqqifnu.
2. Guyyaa fi yeroo Kufaatii Sirna Gabroonfataa shaffisiisuuf Qabsoo Bilisummaa fi Warraaqqsa FXG Golee Oromiyaa hunda keessatti Finiinsuu dha!
Bilisummaan Hawwii fi dharraan hin dhuftu. Wareegama malee.
3.Miseensi ABO, Deggeraan ABO, Hogganni ABO fi WBO dirqama isaa Kan duraaniirra Dachaa Ofitti dabaluu fi Qabsaawuuf Jabaannee hojjechuu dha.
4.Warreen ykn Farreen ABO fi WBO irratti ololtanii fi ABO laaffisuuf Dhamaatan. Gaddaa fi waan mudhii isin kutu isiniif dhaamna! ABO Mootummoota Habashaa Dhufee dabre, H/Sillaasee, Managistuu ykn Dargii Waliin qabsoo godhaa turee Irra aanee as ga ‘eera. Amma Kan harkaa Wal qabnu Wayyaanee dha. Wayyaanee Waliin qabsoo godhaa jirru Ummata Oromoo bal ‘aa fi Gootota Qeerroo Bilisummaa, WBO sabnoontota Oromoo biyya keessaa fi Alaa Waliin Wal qabachuun Qabsoo FXG finiinsuun Bilisummaa keenya gonafannee Biyya keenya irratti Abbaa biyyaa akka taanu waliif dhaamna!
Warreen ABO fi WBO irratti ololtanii fi Farreen QBO taatan.
Bakka feetan jiraa dhaa ykn Jiraadhu. Abbaa feete ta ‘e. Biyya feete Jiraadhu. Shiraa fi daba har ‘a ABO fi WBO, akkasumas tokkummaa Saba Oromoo sharafuu fi QBO haphisuu fi Sharafuuf Ergaa diinaa fi gochaa diiggaa hojjetaa jirtan kamiifuu Seenaaf galmaayee ol isiniif ta ‘a. Ummatni Oromoos daawwachaa fi dhaggeeffachaa, argaas jira.
Boolla seentanii fi biyya itti baqattee ykn dhokattee aftu hin qabdu.
Oromoo dhiiksanii, Oromoo madeessanii Oromoo jalaa dheessanii hin ba ‘an. QBO fi ABO yakkanii, shiraa fi daba QBO irratti dalaganii Miseensota ABO jalaa ba ‘uu fi dhokachuu hin dandeessu.
Galmee fi Warrabbii Isiiniif qabu.
Garuu. Ammumaan gochaa kana irraa dhaabba dhaa ! Jennee isiniif dhaamna.
Kun dhaamsa Oromummaa dha.
Dinnaan Dhimma keessan .ABO fi WBO ammoo akeekaa fi kaayyoo qaba!
Wareegama QBO Isa gaafattu mara lubbuu isaa itti kitimee Qabsoo Bilisummaan galmaan ni ga’a !
ABO fi WBO ololaaf dhiisii
Wayyaaneefuu gab hin jedhuu!
Ummatni Oromoo bal ‘aa haa jiraatu!
Gamtaa fi Tokkummaan saba Oromoo Hundee Dhalootaati! Diinni feete kamuu addaan hin baaftu!
Ashaam , gallatoomi baresaan barruu kan qalamnii kee hibu’iin, horii bulii…, Qeerroon oromootiif WBO oromoo nuuf jiradhaa, injiifanoon taan ummataa oromoot ,gadaan gadaa bilisummatii.